နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို free SMS ပို့လို့ရမယ့်Text Me! Free Texting & Call 2.0.15 ~ IT SuBoo
နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို free SMS ပို့လို့ရမယ့်Text Me! Free Texting & Call 2.0.15
6/22/2013 Android app, Free SMS No comments
ဒီတစ်ခါ အမှန်အကန် နိုင်ငံတကာကို Free SMS ပို့လို့ ရမယ့် ဆော့ဝဲလေးမျှဝေပေးပါမယ့်။ ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာပြည်တော့ မပါပြန်ဘူး။ ဟူး-----။ ဒါပေမယ့် ပါတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ပို့ချင်သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ သူ့ကို အသုံးပြုမယ့်ဆို အကောင့်သစ်ကို သီးသန့်ဖွင့်နိုင်သလို ဖွဘုတ်အကောင့်နှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်ဖွင့်ပြိးတာနှင့် 10 မ်ိနစ် ခေါ်ဆိုခွင့်လည်း ပေးဦးမှာနော်။ နောက်ထပ် မိနစ်လိုချင်သေးရင် သူပေးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကြည့်၊ဂိမ်းတွေကိုဒေါင်းပြီးဆော့ ရင် မိနစ်တိုးပါတယ်။အော် SMS လက်ခံမယ့်သူမှာ ဒီဆော့ဝဲမရှိလည်းပို့လို့ရတယ်နော်။ဒီဆော့ဝဲသူ့ဆီမှာရှိရင်တော့ Free call, Video call တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Related Posts: Android app, Free SMS